रमाईलो र कार्यात्मक बच्चाहरू बेडरूम सजावट विचार - बच्चाको शयन कक्ष
रमाईलो र कार्यात्मक बच्चाहरू बेडरूम सजावट विचार / T सुझावहरू तपाईंको बच्चाको बेडरूम सजावटमा मद्दत गर्न
जुन 29, 2017 by सोफिया हेलेन, कुल अवलोकन:
बच्चाहरूको शयनकक्ष तपाईंको घरको सबैभन्दा बहु-कोठा हो। यो ठाउँ हो जहाँ बच्चाहरू खेल्ने, अध्ययन गर्ने, निद्रा गर्ने, साथीहरूलाई आमन्त्रित गर्ने, र समयसमेत बाहिर जाने छन्। उनीहरू आफ्नो बेडरूममा धेरै समय खर्च गर्छन्। जब बच्चाको कोठा redecorating, सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ आरामदायक र रमाइलो वातावरण सिर्जना गर्नुहुन्छ। कार्यात्मक र सुरक्षित रहेका सजावटका सामानहरूमा लगानी गर्नुहोस्। कार्यात्मक वस्तुहरूले तपाईंको बच्चालाई सिक्न र तिनीहरूको कल्पना विकास गर्न प्रोत्साहित गर्दछ। यहाँ तपाईंको बच्चाहरूको कोठा कसरी सजाउने भन्ने बारे केही विचारहरू छन्
दृश्य कार्यान्वयन क्षेत्रहरुमा अलग गर्नुहोस्
अध्ययन क्षेत्र, खेल क्षेत्र, र आरामदायी ओछ्यानको क्षेत्र दृश्य रूपमा अलग गर्नु आवश्यक छ। यसले बच्चा एक क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गर्दछ कि अर्कोबाट विचलित नहुनु। तपाईं यी कार्यात्मक क्षेत्रहरू लाईट कोठा विभाजक वा कम शेल्फ एकाइहरूको साथ अलग गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस पछि, प्रत्येक प्रकाशात्मक डिजाइनको साथ कार्यशील ठाउँ सजाउनुहोस्। अध्ययन क्षेत्रमा आधुनिक टेबल बत्ती राख्नुहोस्, र सुत्ने ठाउँको लागि रातको एलईडी बत्तीमा चम्किनुहोस्। खेल क्षेत्र तिनीहरूको मनोरन्जनको लागि चम्किलो रंग र खेलौनाहरू भरिनु पर्छ।
बच्चाको उमेर, उचाई, र उनीहरूको बेडरूम फर्निचर चयन गर्दा गतिविधिको स्तर विचार गर्नुहोस्। आज, फर्नीचर डिजाइनर रमाईलो र कार्यात्मक फर्नीचरको एक अद्भुत सरणी प्रदान गर्दछ। अतिरिक्त इनबिल्ट भण्डारण ठाउँको साथ डेक वा बन्क बेड एउटा उत्तम सजावट विचार मात्र होईन, तर यसले सुविधाजनक र आधुनिक भण्डारण पनि प्रदान गर्दछ। पलंगहरू विभिन्न रचनात्मक आकारहरू जस्तै समुद्री डाकू जहाजहरू, महलहरू, वा रूख घरहरूमा पनि आउँदछन्। थप रूपमा, यी बेडहरूले एउटा कोठा डिक्ल्टर गर्दछन् जसले बच्चाको कोठामा विशालता थप गर्दछ।
राम्रो भण्डारण संगठन
धेरै जसो बच्चाहरू कोठाहरू आपतकालीन क्षेत्रहरू जस्ता हुन्छन् जसमा कारहरू, पुतलीहरू, बलहरू, र लेगोहरू सबै भुईंमा फ्याँकिएको हुन्छ तपाईं पर्खनु भएकोमा तिनीहरूको लागि। प्लेटाइम पछि बच्चाहरूलाई खेलौना लिनको लागि अर्को कथा हो। जहाँसम्म, बहु रंगीन खेलौना बक्सहरू र मजा सुविधाहरूको साथ आयोजकहरूले तिनीहरूलाई मद्दत गर्दछ कि सबै पछि रमाईलो छ। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं कार्यात्मक भण्डारणमा लगानी गर्नुहुन्छ जुन तपाईंको बच्चाको लागि खेलौनाहरू हटाउन सजीलो पहुँचयोग्य छ, वरपरको टोटाउन र त्यसपछि उनीहरू कहाँ थिए फिर्ता फिर्ता फिर्ता फर्काउन।
सजावट गर्दा तिनीहरूको रूचि पछ्याउनुहोस्
बच्चाहरूको फरक व्यक्तित्व र चासो हुन्छ। यदि तपाईंको बच्चा पर्याप्त उमेर पुगेको छ, निश्चित गर्नुहोस् कि तिनीहरूले डिजाइन प्रक्रियामा योगदान गर्दछन्। तपाइँको बच्चा को बारे मा भावुक छ पत्ता लगाउनुहोस्; हेलो किट्टी, रोबोटहरू, आकाश वा ज be्गल। यस वस्तुलाई बच्चाको बेडरूम विषयवस्तुमा काम गर्नुहोस्। तिनीहरूको कोठाको लागि उत्तम रंग योजना छनौट गर्न तिनीहरूको विचारहरूको प्रयोग गर्नुहोस्। निश्चित गर्नुहोस् कि रंगहरू ऊर्जावान र रमाईलो छन्। यदि तपाईं पुनःपेन्टिंगमा ठूलो हुनुहुन्न भने, केही भित्ता डेसल्स र तपाईंको बच्चाको ओछ्यान, विशेष गरी कम्फर्टरले एउटा थिम सेट गर्न पर्याप्त छ। यो तपाइँको बच्चालाई खुशी पार्ने एक निश्चित तरिका हो।
केवल तपाइँका बच्चाहरूले कोठा बाँड्नको मतलब यो होइन कि तपाइँले सबै कुरा मिल्नुपर्दछ सर्वश्रेष्ठ बाँस पानाहरू वा फर्नीचर पनि। धेरै बच्चाहरु आफ्नो ठाउँ आफ्नो व्यक्तिगत शैली को साथ भर्न को लागी प्राथमिकता दिन्छन्। तिनीहरूलाई साझेदारी कोठा redecorating जब सम्मिलित गर्नुहोस् र प्रत्येक कोठा को आफ्नो भाग को लागी आफ्नै कलाकृति, ओछ्यान, र एक बेडसाइड बत्ती छान्नुहोस्। तपाईंले नयाँ ओछ्यान किन्नु पर्दैन। तपाईं तिनीहरूलाई बिभिन्न रंगहरूमा रंगाउन सक्नुहुन्छ। तपाईं उनीहरूको ओछ्यानहरूका बीचमा डिभाइडर पनि राख्न सक्नुहुन्छ र सबैको शयनकक्षको छेउमा उनीहरूको मनपर्ने रंगहरू रंगाउन सक्नुहुन्छ।
यो निर्विवाद छ कि बाल्यावस्था क्षणिक छ। अभिभावकको रूपमा, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं उनीहरूको बाल्यकालको अधिकतम लाभ उठाउनुहुन्छ। तिनीहरूको सुत्ने कोठा यो गर्न उत्तम ठाउँ हो। जे होस्, यो निश्चित गर्नुहोस् कि जे पनि डिजाइन तपाईले छान्नु हुन्छ; तिनीहरूसँग तिनीहरूमा केही दीर्घायु हुन्छ। रंगहरू र फर्नीचरहरू लिनुहोस् जुन तपाईंको बच्चासँग बढ्दै जाँदा संक्रमण हुनेछ।
तिनीहरूको सुत्ने कोठा यो गर्न उत्तम ठाउँ हो। जे होस्, यो निश्चित गर्नुहोस् कि जे पनि डिजाइन तपाईले छान्नु हुन्छ; तिनीहरूसँग तिनीहरूमा केही दीर्घायु हुन्छ।
सोफिया हेलेन जुन 29, 2017
यो प्रविष्टि मा पोस्ट घर सुधार र ट्याग शयन कक्ष सजावट विचार, बच्चाको बेडरूम, बच्चाहरूको बेडरूम, सजावट विचारहरु, बच्चा सुत्ने कोठा, बच्चाको कोठा। बुकमार्क को Permalink.
अक्टोबर 24, 2019 उत्तम रचनात्मक घर नवीकरण सल्लाहहरू एक घर नवीकरण परियोजना तपाईंको जीवनको सबैभन्दा ठूलो लगानी हो। यदि तपाईं यो गलत हुन चाहनुहुन्न भने, तपाईं नवीकरण प्रक्रिया भर धेरै सचेत हुनुपर्छ। अधिक तपाईं विवरण मा ध्यान दिन, अधिक गणना निर्णय तपाईं गर्न सक्षम हुनेछ। यहाँ केहि राम्रा रचनात्मक सल्लाहहरू छन् जुन तपाईंलाई तपाईंको घर नवीकरण परियोजनाको साथ मद्दत गर्दछन्। ल्याण्डस्केपि When जब यो तपाईंको घर सुधार गर्ने कुरा आउँछ, चलाखीपूर्ण चालहरू मध्ये एक लन्डस्केपिंग स्थापना गर्नु हो जुन […] पोस्ट घर सुधार
जनवरी 7, 2017 L बैठक कोठा सजावट विचारहरू जुन तपाइँ बिल्कुल माया गर्नुहुन्छ! बैठक कोठा घरको एक मुख्य क्षेत्र हो। सबै कोठाहरू मात्र सेवा गर्दैनन् जसलाई उनीहरूसँग स्थान छ वा बालबालिकाहरूलाई बाध्य पार्ने कलमहरू, परिवार कोठा सबैका लागि हो। यसले साथीहरू, परिवार, र आगन्तुकहरूलाई बस्ने ठाउँ प्रदान गर्दछ जुन सहमत छ। बैठक कोठामा बाँच्नको लागि धेरै दृष्टिकोण छन् समकालीन लिभि Room्ग कोठा: समकालीन परिवार कोठाले राम्रो क्षमताको साथ औपचारिक बैठक बस्ने ठाउँदेखि सहज गाउँको ठाउँसम्म विस्तृत क्षमताको सेवा दिन सक्छ। […] पोस्ट घर सुधार
नोभेम्बर 16, 2018 तपाईं फेब्रिकमा छाला किन छनौट गर्नुपर्छ? जब यो घरको सजावटको कुरा आउँछ त्यहाँ सधैं धेरै विकल्पहरू भएको छनौट गर्नुपर्दछ तर कुनै पनि विचारको अभाव रहेको यस दुविधा हुन्छ। तपाईं मात्र प्रश्न चिन्ह संग छोडिनेछ। यसको कारणले तपाईं या त के चाहनुहुन्न भनेर छनौट गर्न समाप्त हुन्छ। जब तपाइँ सजावट सामानहरू खरीद गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा धेरै विचार राख्नु पर्छ। यो किनभने तपाईले धेरै लगानी गर्नुहुन्छ जब यो फर्निचर जस्तो सामान खरीद गर्न आउँछ। निर्णयमा अवतरण गर्ने उत्तम तरिका भनेको तपाईले के निर्णय गर्नु हो […] पोस्ट घर सुधार
नोभेम्बर 20, 2019 अति उत्तम बाथरूम पुनर्मिलन सल्लाहहरू बाथरूम पुन: निर्माण तपाईको जीवनको ठूलो लगानी हो, त्यसैले तपाईको लगानी अन्तमा भुक्तानी हुनेछ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न यो सही हुनुपर्छ। यसले तपाईको बाथरूमको उपस्थिति बढाउन मात्र मद्दत गर्दैन तर तपाईको घरको मूल्य पनि यदि तपाईले यसलाई जति छिटो पुनः बिक्रि गर्ने निर्णय गर्नुभयो भने। जे होस्, तपाईको बाथरूम पुन: निर्माणको क्रममा तपाईले प्रत्येक महत्त्वपूर्ण कदम चालपूर्वक र बुद्धिले गर्नु पर्छ। तपाइँलाई मद्दत गर्न यहाँ उल्लेखनीय केहि राम्रा बाथरूम पुन: निर्माण सुझावहरू छन्। बजेट सबै भन्दा पहिले, तपाई [ गर्न आवश्यक छ पोस्ट घर सुधार
अक्टोबर 7, 2016 डेस्क मुनिको एक लफ्ट बेडले सीमित स्थानको साथ घरमालिकहरूलाई मद्दत गर्दछ तपाईको सामान्य ओछ्यानबाट फरक जो जमीनबाट केही हदसम्म मात्र टाढा छ, एउटा माउन्ट बेडलाई विशेष डिजाईन गरीएको छ ताकि यो माथिल्लो हेडमा छ। भर्या .मा सजिलैसँग पहुँचको लागि तिनीहरूसँग रमाईलो र सरल तर सरल तरिका हो तपाईंको ठाँउबाट माथिको र तल दुबैबाट धेरै प्राप्त गर्न। अधिकतम दक्षताको लागि तिनीहरू सामान्यतया डेस्कसँग सुसज्जित छन् र यो संयोजनले तिनीहरूलाई बच्चाहरू, किशोर र वयस्कहरूको लागि आदर्श बनाउँछ। गम्भीर ठाउँ बचत गर्नुहोस् त्यहाँ धेरै फरक परिस्थितिहरू छन् जहाँ डेस्कसहित एक मचान बेड […] पोस्ट घर सुधार
नोभेम्बर 27, 2018 कसरी पहिलो घर फर्निसि of को तनाव बाहिर लिने तपाईको पहिलो घर किन्नु उत्साहजनक समय हो, सायद तपाईसँग केहि यस्तो सपना छ जुन तपाईको आफ्नै घरमा आउँदछ। तपाईंको आफ्नै घरको स्वामित्व प्राप्त गर्दा सम्भावित धेरै ढोका खुल्दछ जब सजावटको समय आउँदछ, तपाईंले भाँडाको सम्झौता भ breaking्ग गर्ने चिन्ता नगरी आफूले चाहेजस्तो गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को तर्फ, तपाईं सुसज्जित र शैली को लागी एक पूरै घर छ, जो तनावपूर्ण हुन सक्छ। यहाँ शून्य झन्झटको साथ तपाइँको नयाँ घर कसरी सजाउने भनेर आठ सुझावहरू छन्। १ […] पोस्ट घर सुधार
मार्च 23, 2017 तपाईंको घरको लागि रोमान्टिक प्रकाशमा Es आवश्यक सुझावहरू तिम्रो घरमा साँझ पर्यो। बच्चाहरू अन्तमा उनीहरूको ओछ्यानमा सुतिरहेका हुन्छन्, र कुकुर पनि उसको भित्रबाट निस्किरहेको छ। तपाईको दुबै काममा कडा हप्ता थियो र केहि गुणस्तरीय समयको आवश्यकता सबैले देख्ने गरी प्रस्ट छ। त्यसोभए तपाईं दृश्य सेट गर्न के गर्नुहुन्छ? अनिवार्य मोमबत्तीहरू जलाउनु? तपाईंको एक मात्र प्रकाश स्रोतको लागि डिमर स्विच प्रयोग गर्नुहुन्छ? हामी सबै बुझ्छौं कि वश भएका प्रकाशले रोमान्टिक वातावरणलाई बृद्धि गर्न सक्छ - यो एउटा प्राथमिक चीज हो, जुन आगो ताप्ने हाम्रो इतिहासबाट लिइन्छ […] पोस्ट घर सुधार
अक्टोबर 19, 2018 एक सजिलो र तनावमुक्त घर ट्रान्सफरको लागि5सल्लाहहरू एउटा घर बाट अर्कोमा स्थानान्तरण गर्नु सम्पूर्ण नयाँ जीवन सुरु गर्ने उत्तम अवसर हो। एकै साथ एक घरबाट अर्को घर जाने प्रक्रिया तनावपूर्ण हुन सक्छ। धेरै मानिसहरूले पत्ता लगाउँदछ कि चाललाई धेरै एकाग्रता र प्रयास चाहिन्छ ताकि सबै चालको सुरुदेखि अन्त सम्म यो समाप्त नभएसम्म सबै राम्रो हुन्छ। भाग्यवस, त्यहाँ घरबाट अर्को घरमा जान सजिलो बनाउनका लागि तरिकाहरू छन्। केहि सरल सुझावहरूले सुनिश्चित गर्न सक्छन् सबैले […] पोस्ट सार्दै